Wararka Maanta: Talaado, May 15, 2018-Madaxweyne Farmaajo “Waa in dagaalka Tuka-raq degdeg lagu joojiyaa
Talaado, May, 15, 2018 (HOL) - Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa uu ka walaacsanyahay dagaalka saakay kasoo cusboonday deegaanka Tuka-raq ee Gobolka Sool, kaasoo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Madaxweynaha waxaa uu ugu baaqayaa madaxda, Odayaasha Dhaqanka, Culumaa’diinka, Ururrada Bulshada Rayidka ah, Haweenka iyo Dhallinyarada in ay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaallada haatan socda.
“Waa in dagaalka Tuka-raq si degdeg ah oo shuruud la’aan ah lagu joojiyaa, wax walbana loo maraa dariiqa wada-hadalka.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa uu sidoo kale, baaq u diray beelaha walaalaha ah ee maalmihii lasoo dhaafay ay dirirtu ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyn ee Gobolka Sanaag.
Madaxweynahu waxaa uu tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyoday Tuka-raq iyo Ceel Afweyn, wuxuuna Alle uga baryayaa in uu dhaawaca degdeg u bogsiiyo.